IMotorola izakwazisa ii-smartphones ezine nge-Android One kulo nyaka | I-Androidsis
IMotorola yokuphehlelela iifowuni ezininzi nge-Android One kungekudala
IMotorola yenye yeempawu ezininzi kwi-Android une-smartphone ene-Android One njengenkqubo yokusebenza. Kwimeko yakho yi Moto One, Yaziswa kunyaka ophelileyo kwaye yasungulwa kwihlabathi jikelele, Kwakhona eSpain. Nangona inkampani sele isebenza kwisizukulwana esitsha seefowuni eziza kusebenzisa le nguqulo yenkqubo yokusebenza.
Kwezi veki siyibonile indlela besele zivuza Los Iinkcukacha zokuqala malunga noMbono omnye weMotorolaIfowuni yokuqala eqinisekisiweyo kwesi sizukulwana sitsha nge-Android One.Kodwa kubonakala ngathi inkampani inezicwangciso zokuphehlelela uluhlu olupheleleyo, njengoko besenzile kutshanje nge-Moto G7 yayo ephakathi.
I-Android One yinguqulelo yenkqubo yokusebenza leyo ifumana ukuthandwa kwintengiso, ngakumbi ukusukela ngo-2017 kubonakala ngathi izinto zihamba ngcono ngayo. Kunyaka ophelileyo ezinye iimveliso zenziwe ukungena kwayo kweli candelo, iMotorola yenye yazo. Iimvakalelo bezintle kwinkampani, ubuncinci kubonakala ngathi, kuba ngoku zisebenza kwiifowuni ezingaphezulu.
I-Android enye: Imvelaphi kunye nokuvela kwale nguqulo yenkqubo yokusebenza
Okwangoku, onke amarhe esiwavileyo abhekisa kwi-Motorola One Vision. Nangona inkampani Iyakusishiya neefowuni ezininzi kolu luhlu, njengoko uninzi lwempimpi sele lukhombisile. Omnye wabo, obaluleke kakhulu, nguEvan Blass. I-leaker eyaziwayo ihlala ibonelela ngolwazi oluninzi malunga noku. Ke ngoko, ukukhankanya ukuba kukho iifowuni ezininzi kuphuhliso ngaphakathi kolu luhlu yinto ekufuneka uyigcinile engqondweni.
Motorola Isenzo esinye
- Evan Blass (@evleaks) Aprili 17, 2019
Ukucaciswa, sinokulindela ii-smartphones ezine ngokufanayo. Ke uphawu luya kulandela isicwangciso esifanayo kuleyo bayenzileyo ngohlobo lwabo lweMoto G7, ethi kulo nyaka izise iifowuni ezine okokuqala. Ngale ndlela, amagama olu luhlu lutsha lophawu luya kuba:
Okwesithathu sinedatha kwezi veki, njengenyaniso yokuba Ungasebenzisa iprosesa ye-Exynos. Ukuba ngale ndlela yenye yee-smartphones zokuqala kwimarike ukusebenzisa iprosesa ye-Samsung, Ngaphandle kophawu uqobo. Ngaphandle kwamathandabuzo, kukubheja komdla kwinqanaba lenkampani. Kodwa oko kunokuba nokusebenza kakuhle. Ukongeza, iyenza icace kuthi ukuba yimodeli ekumgangatho ophakathi, kuba iprosesa eyayiza kuyisebenzisa yayiya kuba yi-Exynos 9610, ikwayiprosesa enye esinayo kwi-Galaxy A50, enye yeeflegi zeSamsung embindini -range.
Kwiifowuni zonke ezikolu luhlu lweMotorola asikabinayo idatha. Akukabikho kuvuza kuzo ukuza kuthi ga ngoku, ke kule ngqondo kuya kufuneka silinde ukuvuza okutsha. Inkampani ngokwayo ayithethi kwanto malunga nezicwangciso zayo malunga noku. Asazi ukuba ziza kukhutshwa nini ezi fowuni. Akukho bantu bavuza ukuza kuthi ga ngoku abakwazanga ukubonelela ngolwazi ngale nkcukacha. Ke kuyakufuneka silinde idatha entsha.
Kodwa kuyacaca ukuba i-Motorola iyaxhuma kwi-Android One bandwagon, kunye neefowuni ezine ezintsha. Ngale ndlela, ububanzi bayo obuphakathi buya kuba bugqityiwe, ukuzibonakalisa njengenye yezona ndlela zibalaseleyo koku kwi-Android namhlanje. Ngokukodwa kuba i-Android One yinguqulelo ethandwa ngabathengi, ngenxa yokungabikho kwebloatware kwiifowuni, eziqinisekisa amava omsebenzisi angcono ngawo onke amaxesha. Kungenxa yoko le nto sibona ukuba intengiso yabo inyuka njani.
Nangona ukhuphiswano kweli candelo lukwabalulekile. INokia sele isebenzisa i-Android One kuzo zonke iifowuni zayo, Asinakulibala iXiaomi nokuba, enezizukulwana ezibini kwaye Okwesithathu okwangoku usendleleni. Ke kuyakufuneka ubone ukuba i-Motorola iyakwazi ukwenza umngxunya kweli candelo lentengiso, ethembisa ukusishiya neefowuni ezinomdla kwezi nyanga zizayo. Ucinga ntoni ngezicwangciso zenkampani?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IMotorola yokuphehlelela iifowuni ezininzi nge-Android One kungekudala
I-Ninja Dude vs Zombies 2, umdlalo oqhelekileyo apho uphawula khona ikatana yakho
U-Master Lu uvavanya i-Honor 20, iflegi elandelayo ye-brand